Momba anay - Shenzhen anytec Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anytec Technology Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny 2015, ny vokatray dia ao anatin'izany ny fehin-tànana marani-tsaina vehivavy, famantaranandro marani-tsaina GPS, famantaranandro marani-tsaina ECG ary fiantsoana blueware fiambenana sns. Ny orinasan-tsika dia mifantoka amin'ny sehatry ny fitaovana azo entina marani-tsaina, manana teknika manokana ve izy io ekipa sy mpamolavola ary injenieran'ny ekipa. ireo injenieran'ny talenta 12 eto dia hiara-hiasa aminao amin'ny fampivoarana ireo vao tonga, indrindra ireo izay manana lahasa manokana, ao anatin'izany ny fiantsoana Bluetooth sy ny fanatanjahantena GPS, ary ny endrika lamaody. Raisinay ny kaomandy OEM, ODM ary SKD avy any an-toerana sy any ivelany.
Efitra 1000 tsy misy vovoka mahazatra
1500 + toradroa
Ny tsipika famokarana
Anytec koa dia manohana ireo orinasa mpivarotra, orinasa E - varotra, ary mpivarotra marika, miaraka amin'ny serivisy OEM / ODM mifangaro manomboka amin'ny famaritana ny vokatra, ny famolavolana ID, ny famolavolana fitaovana, ny famokarana betsaka, hatramin'ny fifehezana kalitao sy ny fanamarinana ny vokatra, ny vokatra avy aminay dia manana fanamarinana kalitao iraisam-pirenena, izay manamafy amin'ny tsena manerantany hihaona amin'ny serivisy namboarina ho an'ny mpampiasa rehetra. Ny vokatray dia novokarina nifanaraka tamin'ny fenitra ISO9001 sy ISO14001 ao anatin'izany ny fividianana fitaovana, R&D, Production, fanaraha-maso ary ny varotra, ny ankamaroan'ny vokatray dia mifanaraka amin'ny CE, ROHS, FCC, fanamarinana eropeana EUIPO, mahatratra ny fenitry ny Laboratoara SGS. Nandritra ny 2015 ka hatramin'ny 2018 tao anatin'izay telo taona izay dia nanatrika fampirantiana fivarotana fiambenana marani-tsaina vahiny maro isika, toa ny CES, IFA, Indonezia ary ny foara HK. Ny vokatra misy ny endriny tokana dia tena tian'ny mpanjifa vahiny rehetra.
Ny orinasa R&D dia manana ekipa R&D avo lenta manana olona mihoatra ny 20,
80% amin'izy ireo dia manana mari-pahaizana bakalorea na mihoatra, ary ny mpiasa manan-danja dia manana mihoatra ny 10 taona ny traikefa asa mifandraika sy ny fahalalana momba ny matihanina